Mpanandro Nanaraka Kintana Nankany Amin’​i Jesosy | Fiainan’​i Jesosy
NANARAKA “KINTANA” IRAY IREO MPANANDRO KA TONGA TANY JEROSALEMA, ARY AVY EO TANY AMIN’I JESOSY
Nisy lehilahy mpanandro tonga avy any atsinanana. Mandinika ny toeran’ny kintana ny mpanandro, satria mihevitra fa manampy azy izany mba hamantatra ny dikan’ny zava-mitranga eo amin’ny fiainan’ny olona. (Isaia 47:13) Nahita “kintana” iray izy ireo tany aminy, ka nanao dia an-jatony kilaometatra nanaraka azy io. Tsy nitondra azy ireo tany Betlehema ilay kintana fa tany Jerosalema.
Hoy ireo mpanandro rehefa tonga tany: “Aiza ilay nateraka ho mpanjakan’ny Jiosy? Fa hitanay ny kintany fony izahay tany atsinanana, ka tonga hiankohoka eo anatrehany izahay.”—Matio 2:1, 2.
Tezitra be i Heroda, mpanjaka tao Jerosalema, rehefa nandre izany. Nantsoiny àry ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpitondra fivavahana jiosy ary nanontaniany hoe aiza i Kristy no ho teraka. Namaly araka ny Soratra Masina izy ireo hoe: “Ao Betlehema.” (Matio 2:5; Mika 5:2) Nampiantso mangingina an’ireo mpanandro i Heroda, ka niteny hoe: “Mandehana, karohy tsara ilay zaza, ary rehefa hitanareo izy, dia ilazao aho mba handehanako hiankohoka eo anatrehany koa.” (Matio 2:8) Te hamono an’ilay zaza anefa izy.
Nisy zava-mahagaga nitranga rehefa niainga ireo mpanandro. Nialoha azy ireo ilay “kintana” hitany tany atsinanana. Tsy toy ny kintana rehetra izy io, fa natao hitarihana azy ireo mihitsy. Narahiny ilay “kintana”, mandra-pijanony teo ambonin’ny trano nisy an’i Josefa sy Maria ary ny zanany lahikely.
Rehefa niditra ny trano ireo mpanandro, dia nahita an’i Maria sy Jesosy, izay efa ankizilahikely. Niankohoka teo anatrehan’i Jesosy izy ireo ary nanome azy volamena sy ditin-kazo manitra ary miora. Saika hiverina tany amin’i Heroda izy ireo taorian’izay, nefa nampitandreman’Andriamanitra tamin’ny nofy mba tsy ho any. Lalan-kafa àry no nandehanany nody tany aminy.
Araka ny hevitrao, avy amin’iza ilay “kintana”? Tadidio fa tsy tonga dia nitarika an’ireo mpanandro tany amin’i Jesosy tany Betlehema izy io. Nitarika azy ireo tany Jerosalema kosa ilay izy, ka nahatonga azy ireo hihaona tamin’i Heroda Mpanjaka, izay te hamono an’i Jesosy. Ho vitan’i Heroda izany raha tsy nosakanan’Andriamanitra ireo mpanandro mba tsy hiteny aminy hoe aiza i Jesosy. I Satana fahavalon’Andriamanitra àry no nampiasa an’ilay kintana, satria te hamono an’i Jesosy izy.
Ahoana no ahalalantsika fa tsy toy ny kintana rehetra ilay “kintana” hitan’ireo mpanandro?
Taiza i Jesosy no nipetraka tamin’ny fotoana nahitan’ireo mpanandro azy?
Nahoana isika no milaza fa i Satana no nitarika an’ireo mpanandro?
Zazakely fotsiny ve no tokony hahatsiarovantsika an’i Jesosy? Iza ireo “olon-kendry” nitsidika azy? Inona no ataon’i Jesosy izao?
Hizara Hizara Nitsidika An’​i Jesosy Ireo Mpanandro